Njikwa faili: Mee ka nkọwapụta vidiyo gị na usoro nyocha | Martech Zone
Filestage: Mee ka nkọwa vidiyo gị na usoro nyocha gị
Satọdee, Nọvemba 21, 2015 Sunday, November 22, 2015 Douglas Karr
Anyị na-arụ ọrụ na vidiyo na-akọwa na izu ole na ole gara aga, ọ na-agakwa nke ọma n'agbanyeghị na ọ na-achịkọta ìgwè ise nke talent - onye ahịa, onye edemede edemede, onye na-ese ihe, onye na-eme egwuregwu, na olu karịrị talent. Ndị ahụ bụ ọtụtụ akụkụ na-akpụ akpụ!
A na-enyefe ọtụtụ n'ime usoro ahụ site na otu akụ na onye ọzọ ka anyị na-agagharị na usoro ahụ ka ọ nwee ike ịdị mgbagwoju anya. N'etiti onwe, okwuntughe-echebe Vimeo mbipụta akwụkwọ, ozi ịntanetị, yana sistemụ njikwa ọrụ, anyị na-agbanye gburugburu ma na-arụkwa ọrụ ahụ.
Na ọrụ anyị ọzọ, anyị nwere ike ịdebanye aha maka Filestage! Filestage bụ ntinye ederede vidiyo na ngwa nyocha. Ọ bụ ụzọ kachasị mfe iji kesaa, nyochaa ma kwado ọdịnaya ọdịnaya na ndị ahịa gị na ndị ọrụ gị. Faịlụ na-akwado vidiyo, aghụghọ, nhazi, ihe oyiyi na akwụkwọ. A na-echekwa data ndị ahịa niile ma na-echekwa ya na ntanetị.
Dị ka ị pụrụ ịhụ site na vidiyo ahụ, ikpo okwu a na-anabata ma dị mfe iji. Kasị mma, ọ dị mfe ịkọwa vidiyo na oge etiti oge na ọnọdụ ahụ n'ezie. Faịlụ na-emejupụta ya mere ọ nweere onwe ya iji ruo na njedebe nke afọ. Debanye aha ma nye ya ogbugba! (Weta ya?)
Tags: faịlụvideo vidioihe nlele vidiyo nke ntanetinkọwa vidiyonyochaa vidiyo
Ọ bụrụ na ị na-atụle Njikọ Ndị Ahịa Real-oge site na nchịkọta akparamagwa olu
Jenn Lisak (@eche_ekpe)
Nov 29, 2017 na 10:59 PM
Aga m edere gị ịgwa gị banyere nke a, mana echere m na ị nụla ya. Ana m eji nke a otu ọnwa ugbu a, ma ọ bụ AWESOME! Ahụrụ m ya n'anya.
Nov 30, 2017 na 12:18 AM
Mma dị jụụ!